Madaxda Ururuada Xamaas iyo fatax ee filistiin oo ku kulmaya dalka Turkiga – SBC
Madaxda Ururuada Xamaas iyo fatax ee filistiin oo ku kulmaya dalka Turkiga
Ankara:- Madaxweynaha filistiin maxamuud Cabaas ayaa booqanaya dalka turkiga halkaasi oo uu kulama kula qaadan doono mas’uuliyiin Turkiga iyo hogaamiyaha ururka Xamaas Khaalid Mashcal oo isna casumaad ka helay madaxda dalka Turkiga.
Dublumaasi sare oo katirsan xukuumadda Turkiga oo ka gabsatay in magaciisa la xuso ayaa sheegay in wafdi uu hogaaminayo Khaalid Mashcal uu soo gaaray magaalada Istanbul islamarkaana uu kulamo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Axmed Daa’uud Ogloow iyo mas’uuliyiin katirsan wasaaradda arrimaha dibadda tukiga.
Mas’uulka ayaa intaas ku daray in labada dhinac ay kawada hadleen qadiyada filistiin iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadka u dhexeeya kooxaha filistiiniyiinta.
Sidoo kale labada mas’uul ayaa kawada hadlay sidii loo mideyn lahaa safafka filistiiniyiinta iyo arrimaha gobolka bariga dhexe.
Dhanka kale madaxweyne Cabbaas ayaa la filayaa in uu maanta iyo beri kulamo la yeesho Madaxweynaha Turkiga C/della Guul iyo ra’iisal wasaare Rajab Dayib Ardugaan iyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Daa’uud Ogloow.
Xukuumadda Turkiga ayaa bilihii ugu dambeeyey dadaal ugu jirtay sidii ay isugu keeni lahayd xarkada Fatax ee uu hogaamiyo Maxamuud Cabaas islamarkaana gacanta ku haysa Daanta Galbeed iyo dhaqdhaqaaqa Xamaas ee ka arrimiya marinka Gaza.
Labada dhinac ayaa ku balamay kadib heshiiskii nabadda ee ay ku kula saxiixdeen magaalada Qaahira dhisitaanka xukuumad madax banaan oo diyaarisa doorashooyin barlamaani iyo kuwa madaxtinimo taasi oo caqabad ku timid kadib markii uu madaxweyne Cabbaas uu go’aansaday in ra’iisal wasaaraha haatan xilka haya ee maamulka maxamuud Cabaas uu madax ka noqdo xukuumadaas talaabadaasi oo ah mid ay ka biya diiday xarakada Xamaas.